Cabinet - အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ
လူထုအကျိုးအတွက် ရဲရဲတင်းတင်းလုပ်ဆောင်ကြရန် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
သတင်း ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ စိုးရိမ်စိတ်များပြီး ရဲရဲတင်းတင်း မလုပ်ရဲကြဘူးလို့ ဦးဝင်းထိန်က ပြောပါတယ် (ဓာတ်ပုံ- ဟောင်ဆာ(ရာမည)/မဇ္ဈိမ) နေပြည်တော်(ဧပြီလ ၂၀ရက်၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်)။ ။…
၂၀၁၇ ခုနှစ် သင်္ကြန်ကာလအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအနေဖြင့် သင်္ကြန်နှင့်ပတ်သက်သော ပြစ်မှုပေါင်း (၁၂၀၀) ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ (၂၈၅)ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ (၁၀၇၃)ဦးရှိ
နေပြည်တော် ဧပြီ ၁၇သင်္ကြန်ကာလအတွင်း အဖက်ဖက်မှလုံခြုံရေးများ ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း ပြစ်မှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ သင်္ကြန်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သော အတက်နေ့တွင် ပြစ်မှုပေါင်း (၆၁)မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြစ်မှုများ…
သံမဏိနှင်းဆီ ဂျာနယ်အယ်ဒီတာ ဓားဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံး
သံမဏိနှင်းဆီဂျာနယ်အယ်ဒီတာ ကိုဝေယံဟိန်းကို ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်းက သူ့ရုံးခန်းမှာ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့ သင်္ကြန်အတက်နေ့ မနက်က ဝမ်းဗိုက်မှာ ဓါးဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးနေတာကို တွေ့ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ…
သံမဏိနှင်းဆီဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူ ကိုဝေယံဟိန်း လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခံထားရတာကို ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်အတွင်းက သူ့ရဲ့ အလုပ်တိုက်ခန်းမှာ တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် စခန်းမှူး ဒုရဲမှူး ယဉ်ထွေးက ပြောပါတယ်။ via…
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ပြောကြားသည့် နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက်စကား
via Myanmar President Office http://ift.tt/2oGN6Jb http://ift.tt/1V0lSqx
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ပြောကြားသည့် နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက် ဆုတောင်းစကား
via Myanmar President Office http://ift.tt/2oofcan http://ift.tt/1V0lSqx
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေပြောကြားသည့် နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက်စကား
via Myanmar President Office http://ift.tt/2oolE1g http://ift.tt/1V0lSqx
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သင်္ကြန် ၂ ရက်အတွင်း သေဆုံးသူ ၈၀ ကျော်ရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သင်္ကြန် ပထမ ၂ရက်မှာတင် ယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့် ၈၂ ဦး သေဆုံးကြောင်း သိရသည်။ ယာဉ်မတော်တဆမှု ၅၈၆ မှုဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူ ၆၃၀…
ဆယ်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၆ဃ နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၆ လ ချမှတ်ခံထားရတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သုတေသနဌာနရဲ့ ဒုတိယတာဝန်ခံ ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်းဟာ ဒီကနေ့ လွတ်ရက်စေ့ခဲ့တာကြောင့် အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကနေ…
ကေအဲန်ယူ ဒုဥက္ကဌဟောင်း ပဒို နော်စီဖိုးရာစိန်၏ စကားလက်ဆောင်
“ကျမတို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို အားပေးလိုတာက စိတ်ပျက်ဖို့ မလိုပါဘူး” (၁၆) မြောက် ကေအဲန်ယူ ကွန်ဂရက်အတွင် ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် ဗဟို ကော်မတီဝင်နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့များတွင် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းမခံတော့သည့်…
တရားခံပြေး အောင်ဝင်းခိုင် ရောက်မလာကြောင်း အာဆီယံ(၁၀)နိုင်ငံအနက် ၅နိုင်ငံက အကြောင်းပြန်
သတင်း ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး လေဆိပ်ရှိ CCTV မှတ်တမ်းများအရ သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်ထားသော ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေသူ တရားခံ အောင်ဝင်းခိုင် နေပြည်တော်(ဧပြီ ၁၀ရက်၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်)။ ။…
​ကျောက်​မဲတွင်​ တပ်​မ​တော်​နှင့် တအာင်းတပ်ဖွဲ့တိုက်​ပွဲဖြစ်ပွား
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲမြို့၊ မန်စံရွာနဲ့ ပန်ကျန်ရွာလမ်းဆုံမှာ တီအန်အယ်လ်အေ တအာင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ တပ်မတော်တို့အကြား မနေ့က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး တီအန်အယ်လ်အေ တာဝန်ရှိသူတဦးက “ကျနော်တို့က ပန်စံကနေ…
အျံ့သြဘွယ်ပဲ. .(ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခစခန်း IDP, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရောက်ရှိ်
မြန်မာခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်ဒဏ်ခံရတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့ Palm Spring ဟိုတယ်မှာတွေ့ဆုံ။ 31/3/2017 EPA
မြို့ပြခေါင်းဆောင်များနဲ့ ကာသိုလစ်အသင်းတော်၊ နှစ်ခြင်းအသင်းတော် တာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီး အမျိုးသား ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ မေလမှာကျင်းပမဲ့၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ဖရင့်ကို ပါဝင်ဖို့၊ NCA nationalwide ceasefire agreement အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ထိုးဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ကာသိုလစ်ခရစ်ယန်ဖြစ်သူ မနမ်တူးဂျာ ကလည်း အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။
ကချင်နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် အတွင်းရေးမှု Rev. Hkalam Samso ကလည်း internally displaced people (IDP) စစ်ရှောင် ဒုက္ခသည်စခန်းများအကြောင်း ဒုက္ခသည် ၄၂၀၀၀ အတွက် နိုင်ငံတကာက လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီများကို ကချင်၊ ရှမ်း ပြည်နယ်များကနေ ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကို ဒ်ါအောင်အဆန်းစုကြည်ကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကချင်ဇွံ့ဖြိုးမှုနက်ဝပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး Steven Tsa Ji ကလည်း စစ်ရှောင်စခန်းအကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်က IDP စခန်းမှ စစ်ရှောင်ပြည်သူ ၂၅၀၀ နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘင်္ဂလားဒုက္ခသည်များ မြန်မာတပ်မတော် စစ်ဆင်ရေးကြောင့် ထွက်ပြေး၊ လူ့အခွင့်ရေးကို U.N. Human Rights Council က ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့စေလွှတ်ဖို့ကို မြန်မာအစိုးရက ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
Eleven Media News
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကချင်လူထုခေါင်းဆောင်များနှင့် မတ် ၂၈ ရက်တွင် တွေ့ဆုံစဉ်
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ကို ယုံယုံကြည်ကြည် လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ကချင်လူထုခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ မတ် ၂၈ ရက်တွင် ရောက်ရှိလာပြီး ကချင်လူထုခေါင်းဆောင်များ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းပုဂ္ဂိုလ် ၃၀ နှင့် တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးမှုများ သုံးနာရီနီးပါးကြာ ပြုလုပ်စဉ် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှ ဦးလမိုင်ခွန်ဂျာက “ငြိမ်းချမ်းရေး ဘာကြောင့်ကြန့်ကြာနေတာလဲပေါ့။ ယုံကြည်မှုကြောင့်ပါပေါ့။ ၂၁ ရာစုပင်လုံအနေနဲ့ ကေအိုင်အို ပါဝင်လာအောင် NCA ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လက်မှတ်ထိုးပြီး ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို တက်ရောက်ပြီး အားလုံးဆွေးနွေးနိုင်မှသာ အရှေ့ကိုရောက်နိုင်မယ်ပေါ့။ ကချင်လူထုရဲ့ သဘောထားကတော့ ကျွန်တော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ တက်ရောက်ကြမယ်ဆိုတာတော့ ၀ိုင်းစဉ်းစားကြရဦးမယ်။ ကချင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ အချင်းချင်းလည်း ဒီကိစ္စကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြရဦးမှာပါ” ဟု ပြောကြားသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် အချိန်အနည်းငယ်သာ ရရှိသောကြောင့် လိုအပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း စာဖြင့်ရေးသားတင်ပြခဲ့မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းများ၏ အခြေအနေများကို တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ရှိခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေမှုများ ရှိကြောင်း၊ ယုံ ကြည်မှုများ ပျက်ပြားနေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ တွေ့ဆုံမှုမှာ ကချင်တိုင်းရင်းသားများအတွက် အားတက်စရာဖြစ်ကြောင်း တွေ့ဆုံသူများက ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ကချင်လူထုနှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် မြစ်ကြီးနားမြို့အခြေစိုက် ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့များနှင့် သီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းများ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကချင်လူထုခေါင်းဆောင်များနှင့် မတ် ၂၈ ရက်တွင် တွေ့ဆုံစဉ်
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကချင်လူထုခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ၀ိုင်းမော် ခတ်ချို စစ်ရှောင်စခန်း၊ မိုင်းနား KBC စစ်ရှောင်စခန်း၊ စန်းကား ရေဘေးရှောင်စခန်းများ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကျွန်းပင်သာပရဟိတ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသို့ သွားရောက်ပြီး ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ကာ အားပေးစကားများ ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က ၎င်း၏ ခရီးစဉ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စနှင့် စစ်ရှောင်သူများအား အားပေးစကားပြောကြားရန်၊ တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ကူညီထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကချင်ပြည်နယ် စစ်ရှောင်စခန်းများသို့ မတ် ၂၈ ရက်က သွားရောက်အားပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကချင်လူထုခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ခတ်ချိုဒုက္ခသည်စခန်း၊ မိုင်းနား KBC စစ်ရှောင်စခန်း၊ မြစ်ကြီးနား ရွှေစက်ရပ်ကွက်ရှိ လန်ဆယ်ရေဘေးရှောင်စခန်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ ကျွန်းပင်သာရပ်ကွက်ရှိ ပရဟိတ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၎င်း၏ခရီးစဉ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စနှင့် စစ်ရှောင်သူများအား အားပေးစကားပြောကြားရန်၊ တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ကူညီထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကချင်ပြည်နယ်ရောက်ရှိခဲ့စဉ်က အတူဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသော ကချင်အမျိုးသမီးကြီးများထဲမှ သက်ရှိထင်ရှား ကျန်ရစ်နေသေးသော အမျိုးသမီးကြီးနှစ်ဦးအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ တွေ့ရစဉ် (Photo: Myanmar State Counsellor Office)
၎င်းက စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် “ကျွန်မ ကချင်ပြည်နယ်ကိုလာတာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စက အဓိကပါ။ နောက်ပြီး စစ်ရှောင်တွေအတွက် အားပေးစကား လာပြောတာ။ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က လာပြီးကူညီတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်ကိုလာပြီး တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်လို့ ပြောရတာလည်း ခက်ပါတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရှိသင့်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိလို့သာ ဒီလိုဖြစ်နေကြတာပါ။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းမှပဲ စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀ သက်သာမယ်ဆိုတာကိုတော့ ရှင်းပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးတွေ မလစ်ဟင်းအောင် ကျွန်မတို့ ကူညီနေပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက်လည်း ၀ိုင်းပြီးကူညီမှာပါ။ အနာဂတ်အကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ကိုထားပြီး ကူညီမှုကိုလုပ်မှာပါ။ အားလုံးဝိုင်းလုပ်ကြမှာပဲ အောင်မြင်မှာပါ။ လုပ်ပေးနိုင်တာလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပါပဲ။ စစ်ရှောင်သူတွေဘက်ကလည်း သူများထောက်ပံနေတာကို မှီခိုနေရတာထက် ကိုယ့်လုပ်အားကိုယ်ကိုးနိုင်ဖို့၊ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်ကျောင်းနိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။ အဓိက က ဒီလိုဖြစ်နေတာတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်အောင်လည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကြိုးစားကြပါလို့ ကျွန်မပြောလိုပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ စစ်ဘေး၊ သဘာဝဘေးတွေ ရှောင်နေတာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရဲ့ ပြောပြချက်အရဆိုရင် နှစ်သိန်းကနေ သုံးသိန်းကြားမှာ ရှိနေတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံက လူဦးရေ ၅၃ သန်းရှိတော့ အချင်းချင်းတတ်နိုင်သလောက်ကူပြီး လုပ်ကြပါ။ ကိုယ်မိသားစုမှာ အချင်းချင်းညီညွတ်ကြတော့ ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေက လေးစားကြရတယ်။ နိုင်ငံအတွင်းမှာလည်း တိုင်းရင်းသားတွေ အချင်းချင်း ညီညီညွတ်ညွတ် နေကြရင် နိုင်ငံတိုင်းက လေးစားရမှာပေါ့” ဟု ပြောကြားသည်။
စစ်ရှောင်စခန်းများတွင် စစ်ရှောင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် စစ်ရှောင်သူများက လယ်ယာမြေ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ အကူအညီအထောက်အပံ့ လျှော့ချမှုများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုများကို တင်ပြခဲ့သည်။
အယ်ကွန်ဖန် (မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှုး၊ ဦးနေ၀င်း စစ်အာဏာရှင်ခေတ်က) – U Hla Swe / M Zaw Aung
အယ်ကွန်ဖန် (မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှုး၊ ဦးနေ၀င်း စစ်အာဏာရှင်ခေတ်က) မြစ်ကြီးနားဒူကထောင်ရပ်ကွက်မှာ ရှေ့ပြေးကားအလွန် နောက်ကားမှာပါလာတဲ့ တိုင်းမှုးကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ကြံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အနောက်မြောက်တိုင်း တိုင်းမှုး ဗိုလ်ထွန်းကြည် ကိုယ်တိုင်ရေးသာအုပ်မှာ အယ်ကွန်ဖန် လုပ်ကြံခံရပြီး အဲဒီရာထူးကို သတ္တိအရှိဆုံးဆိုတဲ့ ဗိုလ်ထွန်းကြည် သွားယူရမလို ဖြစ်လို့ မသွားလိုပါ လို့ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ကျော်ဘ ပဲသွားခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်ထိ စနိုက်ပါ ဗုံးကွဲ မြန်မာစစ်ဗိုလ်များစွာသေဆဲ့ ကချင်မျိုးကောင်းများစွာ သေဆုံးနေဆဲပါ။
အယ်ကွန်ဖန် လုပ်ကြံခံရပြီး၊ ဇနီး သားသမီးများနဲ့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်။ သမီး အဆိုကျော် အယ်ခွန်းရီကနေ. မြေး အဆိုကျော် အယ်ဆိုင်းဇီ ကျမှ ပြန်အဆင်ပြေလာခဲ့တယ် ဆိုပဲ။ ကေအိုင်အေ လုပ်ကြံတယ်လို့ အစိုးရက စွတ်စွဲပြီး၊ ကေအိုင်အေ အဖွဲ့ကငြင်းဆိုပါတယ်။ လုပ်ကြံကေအိုင်အေ စစ်သားကို ဖမ်းမိပြီး အခုထိ နှစ်၃၀လောက် ထောင်ကျနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အယ်ကွန်ဖန်အပြီး ဘယ်တိုင်းရင်းသားမှ ဗိုလ်မှုးကြီးရာထူးတောင် ရဖို့မလွယ်တော့ပါ။
လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း၊ စစ်ဗိုလ် တပ်ရင်းမှုဟောင်း ဦးလှဆွေ စာအုပ်ရေးထားပြီး ထုတ်မယ်ပြောပါတယ်။ စစ်ဝါဒီ တဦးဖြစ်လို့ စစ်တပ်ကောင်းကြောင်း ရေးမှာသေချာပေမဲ့ ကချင်လူထုအမြင်နဲ့ ဖတ်ကြည့်ပါဦးမယ်။ စာရေးဆရာ သန်းဝင်းလှိုင် ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်းမော် အကြောင်း စာအုပ်ကတော့ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ကချင်ပါတီများ ပေါင်းစည်းဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ စစ်တပ် ၂၅% ပါတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ စစ်တပ်ကမထွက်ခွာခင် ကေအိုင်အေ ကိုယ်စားလှယ် ၁၀% လောက်တော့ ရသင့်ပါတယ်။
Copied from Hla Swe ‘s facebook (3.Apr.2017)
ကျနော် နှစ်နဲ့ချီ ပြုစုနေတဲ့
“အယ်လ်ကွန်ဖန် အားလုပ်ကြံခြင်း “
အချော ရေးပြီးသွားလို့ စာအုပ်ထုတ်မယ့် လွင်ဦးစာပေကို ပို့လိုက်ပါပြီ ၊ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ KIA ဟာ7star ဆိုတဲ့ လူ ၇ ယောက်မှ စတင် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ၊ ရည်မှန်းချက်မှာ ဝမ်ပေါင်သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်ရန် ဖြစ်ပုံ ၊ မြစ်ကြီးနား ABM ကျောင်းအုပ်ကြီး မရန် ဘရန်ဆိုင်း ရောက်လာမှ တရုပ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နဲ့ အဆက်အသွယ်ရပြီး တရုပ်ပြည်၌ လူ ၄၀၀ စစ်သင်တန်းတက်ကာ လက်နက်ခဲယမ်း များ အထောက်အပံ့ရရှိခဲ့ကြောင်း ၊ နောင်တွင် မော်စီတုံးပုံအားမီးရှို့ခြင်း ဝမ်ပေါင်နိုင်ငံထူထောင်ရေးကို မစွန့်လွှတ်ခြင်း တို့ကြောင့် ဗကပ တို့နှင့် သဘောထားကွဲလွဲပြီး အထောက်အပံ့ဖြတ်တောက်ခံရကြောင်း ၊ ထို့ကြောင့် ယိုးဒယား နှင့် ဘိန်း/ကျောက်စိမ်း ရောင်းချငွေမှ လက်နက်ခဲယမ်းလဲလှယ် စဉ် ငွေကိစ္စ မိန်းမ ကိစ္စများဖြင့် ခေါင်းဆောင် ဇော်ဆိုင်း ဇော်တူး ပုံရွှေဇော်ဆိုင်း တို့ ထိုင်းနယ်စပ်အနီး ရင်း ၁၁ ရင်းမှုး ဆိုင်းတူး၏သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရကာ လမုန်တူးဂျိုင်သည် စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာကြောင်း ၊ လုပ်ကြံသူ ဆိုင်းတူးကိုလည်း စစ်ထောက်လှမ်းရေး စွပ်စွဲကာ သေဒဏ်ပေးခဲ့ကြောင်း ၊
လမုန်တူးဂျိုင်ဆိုသူမှာ ဗိုလ်မှုးချုပ် အယ်ကွန်ဖန် ဗိုလ်ကြီးဘဝ ၊ တပ်မတော် ကချင်သေနပ်ကိုင်တပ်ရင်း (၂) တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် လင်ရှိမယား ကို ကြာကူရီရိုက်၍ ဗိုလ်ကြီး အယ်လ်ကွန်ဖန်က စစ်စည်းကမ်းအတိုင်း အရေးယူ ထောင်ချ ပြီး တပ်မတော်မှ ထုတ်ပြစ် ခံထားရသူဖြစ်ကြောင်း ၊ ၎င်း တပ်ကြပ် လမုန်တူဂျိုင်သည် KIA ၌ စစ်ဦးစီးချုပ် ဖြစ်နေစဉ် တိုင်းမှုးဖြစ်လာသော ဗိုလ်မှုးချုပ် အယ်လ်ကွန်ဖန်ကို အခဲမကြေ လက်စားခြေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ အကြောင်းပြချက်မှာ ၃၃ တန် ကျောက်စိမ်းတုံးကြီး KIA လက်မှ မပခ တပ်များ နိုင်ငံပိုင်အဖြစ် တိုက်ခိုက်သိမ်းယူ သွားခဲ့ခြင်းနှင့် ဓမ္မသစ် ဓမ္မဟောင်း အငြင်းပွားနေသောကချင်ဘုရားကျောင်းအား ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မင်းဂေါင် အမိန့်ဖြင့် အမှု့ဖြစ်နေစဉ် ခတ္တပိတ်ထားရန် လမ်းညွှန်ချက်အား မကြေနပ်၍ ဟု အကြောင်းပြကြောင်း ၊ ထို့ပြင် အယ်လ်ကွန်ဖန် ၏ ဇနီးသည် ကချင်မဟုတ် ၊ သားသမီးများသည် ကချင်စကား မတတ် ဟု အကြောင်းပြကြောင်း ၊ လမုန်တူးဂျိုင်သည် စစ်ဦးစီးချုပ်သာဖြစ်နေသော်လည်း ခရီးထွက်လျှင်မိန်းမအများစုပါသောတပ်ဖွဲ့ကိုခေါ်သွားလေ့ရှိကြောင်း ၊ ရေချောင်းများဖြတ်ကူးရသောအခါ KIA မလေးများခြေထောက်ရေစိုမည်စိုး၍ စစ်ဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင် တစ်ဦးခြင်း ကြင်နာစွာပွေ့ချီကာ ချောင်းတဖက်ကမ်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးလေ့ရှိကြောင်း ၊
အယ်လ်ကွန်ဖန် ဆိုသူမှာ မည်သို့သောလူစားလည်း ? ၊စိန်လုံကမ္ဘာ နှင်းခဲသောတောင်ပေါ်ရွာလေးမှ အမဲလိုက် ငါးဖမ်း သီချင်းဆို ဂစ်တာတီးကျွမ်းကြင် ကာ စာတော်သောလူငယ်လေးဖြစ်ကြောင်း ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဥပစာ သိပ္ပံတန်းအထိတက်ရောက်နေစဉ် နိုက်ကလပ် များ၌ ဂစ်တာတီး သီးချင်းဆို ငွေရှာပြီး မိမိကျောင်းစာရိတ်မိမိ ရိုးသားစွာရှာဖွေကျောင်းတက်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းစစ်ကြီး အင်းစိန်တိုက်ပွဲအထိဖြစ်လာချိန်ဝယ် ကျောင်းတွေပိတ်ထားချိန် စိတ်တူကိုယ်တူ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား သူငယ်ချင်းများစုစည်း၍ တပ်မတော်သားများနှင့်ပူးပေါင်းကာ အင်းစိန်မှ KNDO များကိုတိုက်ထုတ်ရာတွင် ဗော်လံတီယာ အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ထို့နောက် စစ်ထဲတွင်ဝါသနာပါသွားကာ ကျောင်းပြန်မတက်တော့ဘဲ OTS ဗိုလ်သင်တန်း အပါတ်စဉ် (၄) ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ၊ ကျောက်မဲ ခလရ ၂၂ တွင်ကားမှောက်၍ ဘယ်ခြေ ၃ ပိုင်းကျိုးခဲ့ပြီး ကားမှောက်သဖြင့် စစ်စည်းကမ်းအရ လုပ်သက်လျှော့ ပြစ်ဒဏ်ခံယူရင်း၊ ဆေးရုံဆင်းသောအခါ မေမြို့ စစ်ခွေးသင်တန်းကျောင်းသို့ အပို့ခံရကြောင်း ၊
မေမြို့မှာပင် အဆိုတော်မေဆွိ မိခင် မြင့်မြင့်ခင် သူငယ်ချင်း ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်ညွှန့်ညွှန့်မာ နှင့် ခရိယာန် ချပ်စ် တွင် ဓမ္မတေးများသီဆိုရင်းချစ်ကြိုက်လက်ထပ်ခဲ့ကြောင်း ၊ ဒေါ်ညွှန့်ညွှန့်မာ မှာ မိခင် ဗမာ ၊ ဖခင် စကော့ဒစ် လူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ၊ ဗိုလ်ကြီး အယ်လ်ကွန်ဖန်ကို ဂစ်တာတီးသော လက်ချောင်းလေးများကိုကြည့်ပြီး ချစ်ခဲ့မိသည် ဟုဆိုကြောင်း ၊ ထို့နောက် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖို့ဝိန်း တွင် US Army မှ ဖွင့်လှစ်သော ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည့် Ranger Course ကို ပထမ အဆင့်ဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း ထိုအချိန်က အမေရိကန် တွင်အသားအရောင်ခွဲခြားမှု့စနစ်ရှိနေသေး၍ ဒုတိယ သာရသော ပြင်သစ် မှ မျက်နှာဖြူ အရာရှိကို ပထမ ပေးခဲ့ကြောင်း ၊ ထို့နောက် တပ်ရင်းမှုး ဗျူဟာမှုး တပ်မမှုး တိုင်းမှုး ဖြစ်လာကြောင်း ၊ လုပ်ကြံခံရမည့်နေ့က တိုင်းမှုးနှင့်အတူ ရှေ့တွဲနောက်တွဲအဖြစ် ၊ သားလတ်ဖြစ်သူ လယ်လ်ဘောက်ဝါ ( အဆိုတော် လယ်လွန်းဝါဖခင်) နှင့် သားငယ် အယ်လ်ဒွဲဝါ တို့သည် သူငယ်ချင်း တူးအောင် ( One ချန်ပီယံရှစ် အောင်လလဆန် ဖခင် ) နှင့်အတူ ဂေါက်ရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း ၊
ဖခင်၏အားကစားကိုအားပေးမှု့ကြောင့်ထိုနှစ်က ကချင်ပြည်နယ် ဂေါက်အသင်းသည် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အလိုက်အကြောပေး ရိုက်ချက်တွင်ပထမ ရခဲ့ကြောင်း ၊ လုပ်ကြံမည့်အဖွဲခေါင်းဆောင် ဇော်ဆိုင်း ကို ရန်ကုန် ကွန်ဖူးစိုးမြင့်သား မြင့်ဌေး က သင်တန်းကြေး ငွေကျပ် ၆၀ ဖြင့် အနီးကပ်တိုက်ခိုက်နည်းများသင်ပေးခဲ့ကြောင်း လုပ်ကြံမည့်အဖွဲ့ဖြစ်သော ၊ လဖိုင်ဇော်ဆိုင်း ၊ မရူခေါန်းမိုင် ၊ တန်ဘောမ်ထွယ်ဆန် ၊ ဇော်အိမ် တို့ (၄) ဦးသည် တိုင်းမှုးဂေါက်ရိုက်ပြန်သော ညနေပိုင်း၌ တစ်ကြိမ်စောင့်ကြည့်ပြီး နောက်နေ့တွင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မည့်မိုင်နဲကွေ့သို့ ၁၀ မိနစ်ခန့်သာကြိုတင်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း (တပ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့နှင့်တွေ၍ ပုန်းနေရသောကြောင့် ဖြစ်သည်) ယာဉ်တန်းရောက်၍ပစ်ခတ်သောအခါ လုံခြုံရေးများကပြန်မပစ်နိုင်ကြောင်း
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လုံခြုံရေးရဲဘော်များသည် ကျည်မပါသောကျည်အိမ်အလွတ်များကိုသာ တပ်ဆင်ထားကြ၍ဖြစ်ကြောင်း ( တိုင်းမှုးက သူ့ကိုသတ်မယ့် ကချင် မရှိပါဘူးဟု အမြဲပြောကြောင်း ) ပစ်ခတ်မှု့တွင် တိုင်းမှုးအား ၁၄ ချက်မှန်ပြီး PSO မှာလည်ဂုတ်တွင်တစ်ချက်မှန် ကာ နေရာတွင်ကျဆုံးကြောင်း ၊ တိုင်းမှုးမှာ ဆေးရုံအထိ အသက်ပါသေးကြောင်း ၊ ဆေးရုံလိုက်ပို့သူမှာ ထောက်လှမ်းရေးတပ်မှုး ဖြစ်ပြီး ဒုတိုင်းမှုး ဗိုလ်မှုးကြီးကျော်သန်းနှင့် လုံခြုံရေး အရာရှိ တိုင်းမှုး ယာဉ်မောင်း တို့လည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ၊ လုပ်ကြံသူတို့သည် ကျည် တစ်ဘောက်စီသာပစ်ခတ် ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြောင်း ၊
အားလုံးပုဆိုးဝတ်များဖြစ်၍ အရပ်သားအသွင်ဖြစ်ကြောင်း သေနပ်များကို ဖွက်ပြီး ဆုံရပ် ညောင်ပင် တွင် (၄)ဦး မစုံဘဲ ခေါန်မိုင် ကျန်နေသေး၍ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဇော်ဆိုင်း က လိုက်ရှာစဉ် ရပ်ကွက်အတွင်းမှ ရေချိုးနေသော ကချင်လူငယ်များက မသင်္ကာဖြစ်ပြီး ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရကြောင်း ၊ ဖမ်းမိသူ ဇော်ဆိုင်းကို သေဒဏ်ပေးခဲ့သော်လည်း တသက်တစ်ကျွန်းသို့ပြောင်းလဲပေးခဲ့ကြောင်း ၊ ထိုကိစ္စ KIA ဗဟိုဌာနချုပ် ကသူတို့လုပ်တာမဟုတ် ဟုငြင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ၂၇ နှစ်အကြာ ၂၀၁၂ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့်ပြန်လွတ်လာသော လုပ်ကြံသူ ဇော်ဆိုင်း က
” မိမိတို့ KIA ကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့၏ တိုင်းမှုးကိုအနီးကပ်လုပ်ကြံမှု့ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ် ” ဟု
မီဒီယာများသို့ပြောကြားခဲ့ချက်သည် KIA ဗဟိုမှ ငြင်းဆိုချက်နှင့်ကွဲလွဲနေကြောင်း ၊
စသဖြင့် ဓါတ်ပုံများ ဝေဝေဆာဆာ နဲ့ လွင်ဦးစာပေက မကြာမှီ ထွက်လာပါလိမ့်မယ် လို့ ကြိုတင် ကြော်ငြာ ထားပါရစေ ၊ ယ္ခင်ထွက်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ သူရကျော်ကျော်ချို စာအုပ် ကဲ့သို့ အားပေးကြပါကုန် ။
ဦးလှဆွေ အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ .. အယ်ကွန်ဖန်အပြီး ဘယ်တိုင်းရင်းသားမှ ဗိုလ်မှုးကြီးရာထူးတောင် ရဖို့မလွယ်တော့ပါ။
ပုံ – ဗိုလ်မှုးချုပ်အယ်ခွန်ဖန် (မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှုး) နှင့် ဇနီး ဒေါ်ညွန့်ညွန့်မာ
Credit: U Hla Swe / M Zaw Aung
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကချင် ရခိုင် အရေး. ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ရက် ပြည်ထောင်စုနေ့ နဲ့ ပင်လုံညီလာခံ – ဆောင်းပါး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကချင် ရခိုင် အရေး. . .
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ရက် ပြည်ထောင်စုနေ့ နဲ့ ပင်လုံညီလာခံ နေပြည်တော်မှာ ကေအိုင်အေ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ကြတယ် ကောလဟာလသံ ကြားရတော့
ကေအိုင်အေ နီးစပ်သူများကို မေးကြည့်ပါတယ်။ ကေအိုင်အေ နေပြည်တော်လာဖို့ စတင်ကမ်းလှမ်းပါပြီ။ အချိန် နေရာ မပါပဲ လာပါဆိုတော့ တမျိုးပဲ တဲ့။
ဟုတ်လား မေးတော့ . .
“ဘာကြောင့်လဲ နယ်စပ်က ကေအိုင်အေစခန်းလေးတွေ များစွာ ဂိဒေါင်စခန်းအပါအဝင် အင်အားသုံး လေကြောင်းဗုန်းကြဲ သိမ်းပြတာကြောင့်လား . .” . .မေးတော့
” ဒါကြောင့်လဲ မဟုတ်ပါဘူး” . ဖြေတယ်။
” အရင်လက မြန်မာပြည်လုံးဆိုင်ရာ ခရစ်ယန်သင်းအုပ်ဆရာများ ကွန်ဖရင့်မှာ ကချင်ပြည်နယ်က ကချင်သင်းအုပ်ဆရာများ ထပြီး အလွန်မကြေနပ်စွာ ရင်ဖွင့်ကြတယ်။ မြန်မာပြည် အနှံ့က ရောက်လာတဲ့ သင်းအုပ်ဆရာတချို့ ဘာသာရေးကွန်ဖရင့်မှာ နိုင်ငံရေးအသံ ကြားရတော့ အစိုးရလာဖမ်းမလား စိုးရိမ်ကြသေးတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဒို့အားလုံး ကချင်ပြည်နယ် ပြသနာက အရေးကြီးတယ်။ ဝိုင်းဆုတောင်းပေးရမယ် ပြောပြီး ဆုပဲတောင်းပေးကြတယ် ဆိုပဲ။ ဘာပြသနာလဲ ?” . . မေးတော့
“နိုင်ငံရေးပြသနာပဲ” . . လို့ ဖြေပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကချင်ပြည် တိုက်ပွဲတွေမှာ ဘာသံမှမထွက်ဘူး။ ဒါကို ဘယ်လိုမြင်သလဲ ” . .မေးတယ်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်က စစ်တပ်အလိုကျ လုပ်နေရပြီ။ သူက ကောင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာသိ သြဇာကြီးတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးပါ။ လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗမာတွေအတွက်ပဲ ကောင်းတာပါ။ ကချင်တွေအတွက်တော့ မကောင်းဘူး။ ပိုတောင် ဆိုးလာသလိုပဲ။ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေ ပိုတောင်များလာသေးတယ်”. . လို့ ဖြေပါတယ်။
” ကချင်စစ်ရှောင် ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အတိုင်ပင်ခံရုံးက ထောက်ပံ့ငွေ သိန်းထောင်နဲ့ချီ တရားဝင်ပေးနေပြီလေ။ စစ်တပ်က သဘောတူလို့ အစိုးရက တရားဝင်ကူညီ နေပြီပဲ။ ၂၀၁၂ သမတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကတည်းက စစ်တပ်လေကြောင်းထိုးစစ် အကြီးကျယ် လုပ်စဉ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငြိမ်နေပေမဲ့ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်များကို ၃ကြိမ်တိုင် ကျပ်သိန်းရာချီ လှုဒါန်းခဲ့တယ် မဟုတ်လား ” . . လို့
” ဒီအတွက် စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်များကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ဗမာစစ်တပ်သဘောကျ ဖြစ်နေပြီ။ အခုကြည့်သူပါလား . . ဦးကိုနီ မတရား အကြမ်းဖက် လုပ်ကြံခံရလို့ သေဆုံးသွားရှာတာ ဝမ်းနည်းကြောင်း စကားတခွန်းတောင် မပြောဘူးလေ။ ရခိုင်အရေးလည်း ဒီအတိုင်းပဲ . . ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက်တဲ့ ဓါတ်ငွေ့ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ဘီလျံနဲ့ချီပြီး ရခိုင်တွေ တပြားမှမရဘူး။ အလားတူပဲ ကချင်ပြည်နယ်က ကျောက်စိမ်းတွေလဲ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာဘီလျံ နဲ့ချီပြီးရတာ ကချင်တွေ တပြားမှမရဘူး။ ကေအိုင်အေ ကုန်သည်တွေကို အခွန်ကောက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့ကို လျှပ်စစ်ပေးတယ်။ လမ်းခင်းတယ်။ ဒါတောင် စစ်တပ်ကုမဏီတွေနဲ့ အစိုးရ အီးပီစီ က ၂ဆတိုး တောင်းလို့ ပြည်မမှာ လျပ်စစ် တယူနစ် ၃၅ကျပ်. . မြစ်ကြီးနားမှာ တယူနစ် ၃၀၀ကျပ် . . ဒီလိုပဲ ကချင်တွေ အရာရာမှာ အရမ်းနစ်နာနေတာ။ သူလုပ်နေတာတွေက စစ်တပ်လုပ်စေချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်နေတာ။ သူခေါင်းဆောင်မဖြစ်ရင် ကချင်ပြည်နည်အတွက် ပိုကောင်းသလိုပဲ” . . လို့ ဖြေပါတယ်။
“ဟာ . မလုပ်ပါနဲ့ . . ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင် မလုပ်ရင် ဘယ်သူလုပ်နိုင်မှာလဲ။ ညှိနှိုင်းနေရတာပေါ့လေ။ သူ့လောက် သြဇာရှိတဲ့လူတောင် ငြိမ်နေရတာ ကြည့်ပါ။ မလွယ်တာ ဧကန်ပါပဲ။ ကချင် ရခိုင် အရေးတွေက အလွန်ခက်ခဲ ရှုပ်ထွေးတယ် ဆိုတာပြတာပါ။ မြန်မာစစ်တပ်ကြီး ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရှိသလို တရုပ်စစ်တပ်ကြီးလဲ ကချင်နယ်စပ် ယူနန်ပြည်နယ်မှာ ရှိနေတာ သိတယ်မဟုတ်လား. . လို့
မေးကြည့်ပါတယ်။ . .
” တရုပ်နဲ့ မြန်မာ စစ်အင်အားပြိုင်ချင်သလား . . မြန်မာစစ်တပ်က ဘာလို့တရုပ်ကို ချချင်နေရတာလဲ. . မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဗမာစစ်တပ်ကြီး ရောက်နေတာ ကေအိုင်အေကို တိုက်ဖို့ပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကေအိုင်အေ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက အားလုံးနီးပါး စစ်ဆက်မတိုက်ချင်တော့ဘူး။ စစ်တိုက်လို့ ကချင်ပြည်နယ် လူထုပဲ နစ်နာနေတာ အခုကြည့်ပါ. . စစ်ဘေးက အိုးအိမ်ပစ်ပြေးရတဲ့ ကချင်ဒုက္ခသည်တွေ ၄နှစ်ကျော်ပြီ။ အလွန်ချမ်းအေးတဲ့ ဆောင်ဒဏ်ခံ အစာရေစာလည်း မလုံလောက်။ တရုပ်အစိုးရကလည်း မောင်းထုတ်။ ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ကြား မူးရစ်ဆေးဝါး ဆေးပြားနဲ့ ဘိန်းစိုက်ခင်းတွေကလည်း ဘိန်းဘုရင်တွေ ဝိသမစီးပွားရေးလုပ်ပြန်တယ်။ အခုတော့ ဖမ်းဆီးနေပေမဲ့ ပိုင်ရှင်မဲ့တွေချည်း ဖြစ်နေတယ်။ အဆုံးသပ်ရရင် ကချင်လူငယ်တွေ ကေအိုင်အေဖြစ်ပြီး သေနပ်ကိုင်နေရတယ်။ ကေအိုင်အေ မဖြစ်ရင် မူးယစ်သားကောင် ကျောက်စိမ်းတွင်းတူးလုပ်သား ပညာမသင်နိုင် . . တရုပ်ပြည်သွားအလုပ်လုပ် . .ချွတ်ခြုံကျနေတာ စစ်ပွဲကြောင့်ပဲ။
ကေအိုင်အေ က စစ်မတိုက်ချင်ပဲ . NCA အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်မထိုးနိုင်ပဲ . . ကချင်ပြည်နယ် ပြည်တွင်း စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတာ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်”. . လို့ ဖြေပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကချင်ပြည်နယ် တခါမှ မရောက်ဖူးသူ ကချင်ကျေးရွာတွေကို မရောက်ဖူးသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံသူမိတ်ဆွေနဲ့ ဆက်ပြောကြပါတယ်။ သူကတော့ ကေအိုင်အေ NCA အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေးကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယုံကြည်စွာ လက်မှတ်ထိုသင်ကြောင်း။ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရင် ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင် တို့ အုပ်စု အငိုက်မိသွားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးစဉ် လမ်းစ ပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ကြောင်း ၂၅% စစ်သားတွေ အမြန်ဆုံး လွှတ်တော်ထဲက ထွက်သွားစေချင်ကြောင်း . .စသဖြင့် ပြောတာ နားထောင်ရပြန်တယ်။
ဖေ့ဘုတ်ကနေ လူသောင်းချီ လိုက်ခ် ပေးမှုရရှိထားတဲ့ ဝန်ကြီးဟောင်တဦး ရေးထားတာလည်း စစ်တပ်ဖက်ကပါပဲ။ သူကိုယ်တိုင် ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဗိုလ်ကြီးဘဝ စစ်ဆင်ရေးတွေ လုပ်ခဲ့စဉ်အကြောင်း ကချင်လူမျိုးများအကြောင်း ခရစ်ယန်ဘာသာအကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကေအိုင်အေ ပျောက်ကျားစစ်ကို နိုင်ဖို့ မလွယ်ကြောင်း သိပေမဲ့ . . သူ့အာဘော်ကတော့ တရုပ်က မပံ့ပိုးအောင် ဖြတ်တောက်ဖို့ . . တရုပ်စစ်တပ်နဲ့ မြန်မာစစ်တပ် ၂ခုပေါင်း ညီညွတ်လာရင် ကေအိုင်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးပါလာမယ် အယူအဆတွေ တွေ့ရပါတယ်။ စစ်ဝါဒီ အမြင်တွေ သူတို့ (စစ်ဗိုလ်အငြိမ်းစားတွေ) မှာ ရှိနေတာ မဆန်းပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း အနောက်မြောက်တိုင်းမှုးအငြိမ်းစား ဗိုလ်ထွန်းကြည် ကတော့ . . သူကိုယ်တိုင်ရေးအထုပ္ပတိ အထူကြီး ၃တွဲ ထုတ်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း (သူ့အပေါ်) စစ်တပ်ကကောင်းကြောင်း။ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ထောက်လှမ်းရေးကြောင့် သူ ရာထူးကထွက်ရကြောင်း။ ကချင်ပြည်နယ်ကို ကေအိုင်အေနယ်မြေ စစ်တိုင်းမှုးမလုပ်လိုကြောင်း။ သူ့သူငယ်ချင်း အယ်လ်ကွန်ဖန် တိုင်းမှုး လုပ်နေတုန်း လုပ်ကြံခံရလို့ ဗိုလ်ထွန်းကြည် တိုင်းမှုးသွားလုပ်ဖို့ ဖြစ်လာတော့ . . မသွားလိုကြောင်း လူကြီးများကို ပြောကြောင်း. .သူ့စာအုပ်မှာ ဝန်ခံရေးသားထားပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်က ခက်ခဲကြောင်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေမှာ သမာသမတ်အရှိဆုံးတယောက် ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌဟောင်း ကြီးကလဲ ပြောပါတယ်။
ကျန်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်စိတ်ရှိသူတွေ စစ်ဝါဒီတွေက ” ချကွာ ချကွာ. . အမြင်ရှိသူများစွာ တို့နဲ့အတူ သူတို့လည်း” ကချင်ရွာတွေ တခါမှမရောက်ဖူးကြပါဘူး။ ရောက်ဖူးသွားသူများကတော့ အပြတ်တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းဖို့ မလိုလားကြပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်မှန်း သိလို့ပါ။
တရုပ် အမေရိကန် ဒေသသြဇာအတွက်ရော စီးပွားရေးအင်ပါယာချဲ့ဖို့ ကြိုးစားနေတာ တရုပ်ပဲ နိုင်နေဆဲပါ။ စစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင် ဦးသန်းရွှေ ကတော့ တရုပ်အင်ပါယာချဲ့တာ သူမတတ်နိုင်လို့ . မကာကွယ်နိုင်လို့ ဆင်းပေးသွားပါတယ်။ .ပြီးတော့ သူ့မိသားစုလဲ ဦးနေဝင်းမိသားစုလိုပဲ နာမည်ပျက် ထောင်ကျ မဖြစ်လိုတာ အဓိက ကျမယ် ပြောသူများလဲ ရှိပါတယ်။ သူ့သြဇာခံ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလည်း တရုပ်သြဇာ တောင့်မခံနိုင်ပါဘူး။ မြစ်ဆုံ ကြေးနီ ကျောက်စိမ်း နဲ့ ရွှေဓါတ်ငွေ့ သယံဇာတတွေနဲ့ ကချင် ရခိုင် လူမျိုးရေး ပြသနာ ရှုပ်ထွေးပြည်တွင်းစစ်. . မငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါ။ အရေးထဲ ဗုဒ္ဓ မွတ်ဆလင် ခရစ်ယန် ဘာသာရေးကို အသုံပြု လျို့ဆော်တဲ့ မဘသ စတိုင်လ် တွေကိုလည်း သတိထားနေရပါမယ်။ ကြံခိုင်ရေးပါတီ အစိုးရလည်း လူထုလုံးဝမကြည်ဖြူတော့ ရွေးကောက်ပွဲ အပြတ်သတ်ရှုံး အာဏာလွဲပေးရပါတော့တယ်။
အခု အတိုင်ပင်ခံရုံးက ကချင်ပြည်နယ်အတွက် ခြေလှမ်း ပံ့ပိုးမှုကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ပင်လုံညီလာခံ အတွက် ကေအိုင်အေ NCA အပစ်ခတ်ရပ် လက်မှတ်ထိုးဖို့ နိုင်ငံရေးပြသနာ အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်ကြဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်ရှောင် ..(ဂွမ်ထန်ဂမ်ရှောင်)မြကျွန်းညို နှင့် စိမ်းသောပြာသောမှိုင်းသောတောင်တန်းများဆီသို့
A Len Yang Seng added3new photos.Follow
(ဂွမ်ထန်ဂမ်ရှောင်)မြကျွန်းညို နှင့် စိမ်းသောပြာသောမှိုင်းသောတောင်တန်းများဆီသို့
ရန်ကုန်စီးပွါးရေးတက္ကသိုလ်ကို ထိုစဉ်ကEcoဟုခေါ်လေ့ ရှိသည်။ ထိုစဉ်က Eco သည် ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ် RASU ဝင်းထဲ၌ရှိသည်။ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၏ လက်ျာဘက်တွင် Eco ပင်မဆောင်ရှိသည်။ ပင်မဆောင်၏ရှေ့နှင့် ဂျပ်ဆင်ကြားတွင် AE မြေစိုက်ဆောင်လေးများမှာလည်း Eco ၏ စာသင်ဆောင်များ ဖြစ်သည်။
AE ဆောင်များဘေးတွင် Eco စာသောက်ဆိုင်တန်းရှိသည်။ ဦးယမ်းဘီလူးအအေးဆိုင်တို့ ကိုအောင်ရင်လဘက်ရည်ဆိုင်တို့က ကျောင်းသားများကြားနံမည်ရသည်။ ပင်မတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း ရွှေဘိုဆောင်သည် Eco ကျောင်းသားတို့၏အဆောင်ဖြစ်ပြီး မာလာဆောင်ကတော့ ကျောင်းသူတို့၏ အဆောင်ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ် သမိုင်းဝင်းတွင်းတွင် Eco ကျောင်းသားများအတွက် မေခဆောင် ကျောင်းသူများအတွက်အင်ကြင်းဆောင်တို့ ရှိသေးသည်။
ကျောင်းတက်ရက်တွင်မတော့ Eco အတွင်းကျောင်းသားတို့နှင့် စည်းကားသည်။ ပင်မတက္ကသိုလ်အတွင်း တဆက်တစပ်တည်း ဆိုတော့ RASU ဘက်ကကျောင်းသားများနှင့်လည်း ရောယှက်နေသည်။ ထိုစဉ်အခါက Eco တွင်အချောအလှပေါ သည်ဟု နံမည်ကြီးသဖြင့် အခြားတက္ကသုိလ်မှ ကျောင်းသားများ လည်း လာရောက်အစွံထုတ်လေ့ရှိသဖြင့် ပို၍စည်ကားခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်။ ထိုစဉ်က မြကျွန်းညိုညိုတက္ကသိုလ်တွင် Eco ကျောင်းတော်သည် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတို့ ပျော်စံရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၇၀-၁၉၇၄ Eco စာသင်နှစ်များအတွင်းမြကျွန်းညိုတွင် ကချင်ကျောင်းသားတစ်ဦးရှိခဲ့သည်။ အသားဖြူဖြူ အရပ်မနိမ်မမြင့် လူပုံနွဲ့နွဲ့ခပ်ပြုံးပြုံးနေတတ်သော အနေအေးဆေးသော ကချင်ကျောင်းသားတဦးဖြစ်သည်။ အချိန်အားလျင်ဂစ်တာလေး တလုံးဖြင့် ငြိမ့်နေတတ်သည်။ထိုအနေအေးသော ကချင် ကျောင်းသားသည် Eco ၌ ရေပန်းစားသော လူသ်ိများသော ကျောင်းသားတစ်ဦးတော့ မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ၁၉၇၄ စာသင်နှစ်ကုန်တော့ သူသည် အခြားကျောင်းသားများနည်းတူ မြကျွန်းညိုမှာ ခွဲခွါသွားခဲ့သည်။ ထိုကချင်ကျောင်းသား၏ အမည် မှာ ဂွမ်ထန်ဂမ်ရှောင်ဟုခေါ်ပါသည်။
တရံတခါက ဆည်းဆာနေချည်ဖျာကျနေသောတညနေခင်း တွင် မေခမြစ်၏ တဖက်ကမ်းရှိ သဲဖြူလွလွပေါ်တွင်ထိုင်ရင်း မေခမြစ်ဟိုမှာဖက်ကမ်းရှိတောင်စဉ်အထပ်ထပ်ကိုငေးမောကြည့်မိ သည်။တောင်တို့သည်စိမ်း၍ တောင်တို့သည်ပြာကာ တောင်တို့ သည်မှိုင်းနေ၏ ။ အနီးဆုံးတောင်တန်းက သစ်ပင်တို့နှင့် စိမ်းနေသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိသစ်ပင်တို့ကို သဲကွဲစွာမမြင်ရသော တောင်တန်းတို့က ပြာနေသည်။ အဝေးဆုံးရှိတောင်တန်းများ ကတော့ မှိုင်းပြနေသည်။ တူညီသောအလင်းရောင်အောက်တွင် အကွာအဝေး အနီးအဝေးက အမြင်အာရုံတွင်အရောင်များကို ပြောင်းလဲစေလိုက်သည်။
ထိုစိမ်းသောပြာသောမှိုင်းသော တောင်တန်းတနေရာတွင် ကိုဂမ်ရှောင်နှင့်ဆုံခဲ့သည်။ ၁၉၇၇လောက်ကဖြစ်သည်။ Eco ကကျောင်းပြီးဘွဲ့ရခဲ့သော ဂွမ်ထန်ဂမ်ရှောင်တယောက် ထိုအချိန်တွင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ၏ စစ်သား တယောက်ဖြစ်နေပေပြီ။ မျိုးချစ်ကချင်ပြည်သူများအတွက် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သူတဦးဖြစ်နေချေပြီ။ စစ်အစိုးရအတွက်တော့ကချင်သူပုန်တယောက် ဒါမှမဟုတ် အရင်တုန်းကတော့ ကချင်သောင်းကျန်းသူဟု ခေါ်သည်။ ယခု ငြိမ်းချမ်းရေးကာလမှာတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းဟုပြောင်းခေါ်သည်။ သူဖက်ကကြည့်တော့ လက်ဖဝါး ကိုယ့်ဖက်ကကြည့်တော့ လက်ဖမိုးဟု ဆိုကြမည်လောမသိပေ။
ဂွမ်ထန်ဂမ်ရှောင်တယောက်ဘွဲ့ရပြီးသည်နှင့်KIAထဲသို့ ဝင်ခဲ့ပုံရသည်။ ၁၉၇၇ တွင် လက်မောင်းတွင်နှစ်ရစ်နှင့် တပ်ကြပ်ဖြစ်နေပြီ။ KIA အပါ တောတွင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း များအနေနှင့် စဝင်သည်နှင့် တပ်သားဘဝက စတင်ဖြတ် သန်းရသည်။အောက်ခြေက စရသည်။ KIA တပ်အတွင်း ၂ နှစ်ခန့် ဖြတ်သန်းအပြီး တပ်ကြပ်တယောက်ဖြစ်လာသည့်တိုင် စစ်သားပုံတော့ သိပ်မပေါက်သေး။ လူပုံကခပ်နွဲ့နွဲ့နှင့် မျက်နှာ ချိုချိုနှင့်ပင်ရှိသေးသည်။ ထို့အတူ သူနှင့်အတူKIA တွင်း ရောက်လာသူ တက္ကသိုလ်ထွက် ကချင်ကျောင်းသားများကြားတွင် နှိမ့်ချမှုရှိ၍ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဟုဆိုရမည်။
ထို့နောက်တွင်တော့ သူနှင့်မဆုံဖြစ်တော့ပေ။သတင်းဆက် သွယ်ရေး ကလည်း ခက်ခဲသောကာလများဖြစ်ပေရာ သတင်းကြားရဘို့လည်း မလွယ်ကူခဲ့ပေ။ ၁၉၉၀ ခန့်တွင်မှ သူ့သတင်းကြားရသည်။ ထိုကာလတွင် သူသည်KIA တပ်မဟာ ၂ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၆ ရင်းမှူး ဖြစ်နေပေပြီ။ KIA ရင်း ၆ သည် ဖါးကန့်ဒေသအား တာဝန်ယူစိုးမိုးသည်။ မြောက်ဖက် လုံးခင်း ကံစီးမှသည် တောင်ဖက်ဝှေခါ ဒေသထိ လှုပ်ရှားပြီး ဖါးကန့်ဒေသကို စိုးမိုးလှုပ်ရှားသည်။
ဂွမ်ထန်ဂမ်ရှောင် ရင်း ၆ ရင်းမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူထားစဉ် လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်သတင်းတခု ပေါ်ခဲ့သည်။ စပေါ့ချောင်းဖျား အရေးအခင်းဖြစ်သည်။ဖါးကန့် ဆိုင်းတောင် ဒေသတွင်ဖြစ်သည်။ နံပါတ်ဖိုး မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူအချို့အား သေဒဏ်ပေး၍ ပစ်သတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗီဒီယို တိပ်ခွေပါထွက်လာ၍ ဂယက်အတော်ထသွားသည်ဟုဆိုရမည်။
ထိုလုပ်ရပ်ကမကြိုက်သူများကတော့ ရက်စက်ကြမ်းတမ်း လွန်းသည်ဟုဆိုကြသည်။ ထောက်ခံသူများကတော့ ဤကဲ့သို့ ခပ်ပြတ်ပြတ်အရေးယူခြင်းသည်ကောင်း၏ဟု ဆိုသည်။ ထိုစဉ်က ဖါးကန့်ဒေသ ကျောက်သမားများ အထူးသဖြင့် ကျောက်တူးသမား များကြား ဖိုးစွဲနေသူများလှသည်။ အရိုးပေါ်အရေတင်၍ ဖိုးစွဲ နေသူများ နေ့စဉ်လိုလို ဖါးကန့် ဆိုင်းတောင် ရွာများတွင် သေဆုံးနေကြသည်။ ဆွေမျိုးညာတိမရှိပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်း များ အဖြစ် ရပ်ရွာက သဂြိုင်္လ်ပေးနေရသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် စပေါ့ချောင်းဖျား အရေးယူမှုပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီနောက်တွင်တော့ သူသတင်းသိပ်မကြားရပြန်တောO၁၉၉၄ KIA နှင့် နဝတ အပစ်ရပ်ပြီးသည့်နောက်KIA ၏ ဗဟို ဆက်သွယ်ရေးရုံးကို မြစ်ကြီးနား စီတာပူတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ KIA နှင့်တကျော့ပြန်စစ်ပွဲဖြစ်သည့် အချိန်ထိပင်ဖြစ်သည်။
ထိုကာလများတွင် ဂွမ်ထန်ဂမ်ရှောင်တယောက်KIA ဗိုလ်မှူးကြီး အဖြစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံအဖြစ် အချိန်တပိုင်းတာဝန် ယူခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
၂၀၁၁ KIA နှင့် အစိုးရ ပြန်လည်းစစ်ပွဲဖြစ်တော့ သူနံမည်ပြန်ကြားရသည်။ ထိုအချိန်တွင် သူသည်KIA ၏စစ်ဦးစီးချုပ် CS ဖြစ်နေပေပြီ။ ကချင်ပြည်နယ်နှင့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိ တိုက်ပွဲများ နှင့်အတူသူ့နံမည်ကို မကြာခဏ ကြားရသည်။ ဒီဘက်ခေတ်ကတော့ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ မြင့်မားသည်ခေတ် မဟုတ်ပါလော။
ဒီနှစ်ဆန်းတွင် KIA စစ်ဦးစီးချုပ် ဂွမ်ထန်ဂမ်ရှောင်မိန့်ခွန်း ပြောနေသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်တခုအင်တာနက်စာမျက်နှာများ ပေါ်တွင် ပျံ့လွင့်လာသည်။ ယခင် ငယ်ရွယ်နုပျိုမှု နေရာတွင် ရင့်ကျက်မှုဖြင့်အစားထိုးလိုက်ပေပြီ။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးမှုနေရာတွင် လေးနက်သောကြီးမားသောတာဝန်များက ဝင်ရောက် လာခဲ့ပေပြီ။
သူ၏ လူထုအား ကချင်ဘာသာဖြင့်ပြောကြားရာတွင် ဗမာပြည်ရှိ တိုင်းရင်းသားအားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရန်လိုကြောင်း ပြောဆိုပြီး အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ တရားစီရင်ရေးအာဏာ ဥပဒေပြုရေးအာဏာဟူ၍ အာဏာသုံးရပ်ရှိသည့်အနက် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးအာဏာ ၂ ရပ်သာတိုင်းရင်းသား တို့ကရပြီး ဥပဒေပြုခွင့်အာဏာကို တိုင်းရင်းသားတို့မရပါက တန်းတူရေးရရှိသည်ဟုမဆိုနိုင်ကြောင်း ထောက်ပြပြောဆို သွားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ တိုင်းရင်းသားအားလုံးတန်းတူရေး ပြသနာသည် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အတွက် အဖြေ လည်း ဖြစ်သည်။
မြကျွန်းညိုညို တက္ကသိုလ်သည် ပညာရပ်ပေါင်းစုံသင်ကြားရာ နှီးနှောဖလှယ်ရာ သုတေသနပြုရာအပြင် စာပေ ဂီတ အနုပညာ ယဉ်ကျေးမှုတို့ထွန်းကားရာလည်းဖြစ်သည်။ဤအမိတက္ကသိုလ်တွင် သင်ကြားလာခဲ့သောပညာရပ်များဖြင့် မိမိလူမျိုးကို မိမိတိုင်းပြည်ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကောင်းကျိုးပြုကြဘို့ သာဖြစ် သည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများတွင် ထိုသုိ့သာဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်သည်လည်း ငြိမ်းချမ်းသော ဒီမိုကရေစီရှိသော တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်ပါကဂွမ်ထန်ဂမ်ရှောင်လည်း စီးပွါးရေးပညာရှင် တယောက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။သို့မဟုတ်က အောင်မြင်သော စီးပွါးရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်မည်။ သို့မဟုတ် သူနှစ်သက်သောဂီတနယ်ပယ်တွင် ကျင်လည်ကောင်း ကျင်လည်နေပေလိမ့်မည်။
သို့သော် ယနေ့ဗမာပြည်မှာတော့ ဂွမ်ထန်ဂမ်ရှောင်ကဲ့သို့ ကျောင်းသားအများအပြားသည် ပညာရှင်များဖြစ်မလာခဲ့။ တက္ကသိုလ် ပရဝုဏ်လည်း စစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကတ္တရာလမ်း တို့ လည်းသွေးစွန်းခဲ့သည်။ စာသင်ခန်းထဲမှ ကျောင်းသားတို့လည်း ပေတရာလမ်းပေါ်ရောက်ခဲ့သည်။ အကျဉ်းထောင်များသုိ့ ရောက်ခဲ့သည်။ တောတောင်အနှံ့ရောက်ကြသည်။ ကလောင် မကိုင်နိုင်ခဲ့ကြဘဲ သေနတ်ကိုင်ကြဖို့ဖန်လာခဲ့သည်။
မြကျွန်းညိုညို တက္ကသိုလ်နယ်မြေတွင် ကန့်ကော်ပန်းတို့ မမွှေးမြနိုင်ခဲ့ ။စိန်ပန်းပွင့်တို့လည်း မွမွကြေခဲ့ရသည်။ တိတ်ဆိတ် မှောင်မိုက် ငြိမ်သက်နေသည့် တက္ကသိုလ်၏ ညများတွင် သစ်ပုတ်ပင်အို၏ငိုရှိုက်သံသဲ့သဲ့ကို ကြားရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် တက္ကသိုလ်ရင်ခွင်မှ ထွက်ခွါလာသူတို့သည်အချည်နှီးတော့ မဖြစ်ခဲ့ကြ။ သူမအား စိတ်မပျက်စေခဲ့၍ သူမ ကြေနပ်နိုင်လိမ့်မည် ဟုတော့ ထင်ပါသည်။
ငြိမ်းချမ်းသည့် တန်းတူမှုရှိသည့် ဒီမိုကရေစီရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံတော်သစ်အား ရည်မျှော်လျက်။
ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် ကေအိုင်အို ဒုဥက္ကဌ(၂) ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများမှာ ပြက်သားတိကျတဲ့ ပြောဆိုဖော်ရွေမှု များ – အင်ခိုင်ဘွန် / သန်းဝင်းလှိုင်
M Zaw Aung
ကေအိုင်အို ဒုဥက္ကဌ(၂) ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများမှာ ပြက်သားတိကျတဲ့ ပြောဆိုဖော်ရွေမှု များနဲ့ လူသိများလာသူဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၅၇ခုနှစ် မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကချင်ကျောင်းသားများ ကျယ်ပြန့်စွာဆွေးနွေးရင်း Seven Stars ခေါ်တဲ့ ကချင်ကျောင်းသား (၇)ဦး ကချင်အခွင့်ရေးများ လုပ်ဆောင်ရင်း နောက်ဆုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ် ရောက်သွားပါတယ်။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ ၁၉၆၂ခုနှစ် ဇန္နဝါရီ(၅)ရက် မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ အဖဦးဆွန်လွတ်တူး အမိဒေါ်ဂျီစောလွီ တို့ရဲ့ မွေချင်း(၅)ယောက်မှာ အကြီးဆုံးသားအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
မိခင် ကျန်းမာရေးဆရာမကြီး တာဝန်ကျမြို့များမှာ အတူလိုက်ပါ ပညာသင်ရင်း မြစ်ကြီးနား အထက(၁) က ဆယ်တန်းအောင်ပါတယ်။ ၁၉၇၉ မှာ မြစ်ကြီးနား ဒေသကောလိပ် တက်ရောက်ပြီး မန္တလေးတက္ကသိုလ် ရှုပဗေဒဘွဲ့ ၁၉၈၇ခုနှစ်မှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝ Chyuran Shalat ခေါ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားမျက်ပွင့် မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သောင်းပြောင်းထွေလာ စာစောင်မှာ ဆောင်းပါး ကဗျာများ ရေးသားခဲ့ပြီး ဒရမ်တီးသူ ဂီတသမားဖြစ်ကြောင်း ဂီတပညာရှင် မြန်မာပြည်သိန်းတန် လေးဖြူ ဇော်ဝင်းရှိန် တို့က ပြောကြားကြပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရပြီး ကေအိုင်အေ သို့ ဝင်ရောက်သွားပါတယ်။
” ၁၉၈၇ ဒုတပ်ကြပ်
” ၁၉၉၀ တပ်ကြပ်ကြီး
” ၁၉၉၁ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ ဒုဗိုလ်
” ၁၉၉၃ ဗိုလ်
” ၂၀၀၁ ဗိုလ်ကြီး
” ၂၀၀၂ ဗိုလ်မှုး
” ၂၀၀၃ မဟာဗြူဟာမှုးနဲ့ ကေအိုင်အို တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေမှုး ဖြစ်လာပါတယ်။
” ၂၀၀၅ မှာ ဒုဗိုလ်မှုးကြီး အဆင့်တိုးမြှင့်ခံရပြီး ညွန်ကြားရေးမှုးဖြစ်လာပါတယ်။
” ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ တာဝန်ကျေပွန်မှုကြောင့် ဗိုလ်မှုးကြီး အဖြစ်နဲ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဖြစ်လာပါတယ်။
” ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ KIO အမြဲတမ်းဗဟိုကော်မတီဝင် နဲ့ ဗိုလ်မှုးချုပ် ဒုစစ်ဦးစီးမှုး ဖြစ်လာပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် ပျော့ပြောင်းတဲ့ နိုင်ငံရေး အားကောင်းသူ ဖြစ်ကြောင်း။ စာအုပ် ၆၀၀၀ ကျော်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက် တခုရှိကြောင်း။ မိမိဘဝ ဇတ်ကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်ရေးသားနေကြောင်း။ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခေါ်န်ဒင့် (စစ်သမီးဟောင်း) နဲ့ သမီးနှစ်ယောက်နဲ့ သားတယောက် ဖခင်ဖြစ်ကြောင်း ။ သူနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အထုပ္ပတိ စာရေးဆရာ သန်းဝင်းလှိုင် ရဲ့ အမြင်ကတော့ ..သူ စာဖတ်တယ် စာရေးဆရာတွေကိုခင်တယ် လိုအပ်သူတွေကို အကူညီပေးတယ် စိတ်ထားကတော့ အင်မတန်ကောင်းပါတယ် ဟု မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။
ယခု ဦးထင်ကျော် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရ လက်ထက်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင် ရောက်မလား။
မြစ်ကြီးနား သတင်းဂျာနယ် (၂)နှစ်မြောက် အထူးထုတ် (အခမဲ့ ဖြန့်သည်)။
၁။ ဒီမိုကရေစီပြောင်းပြန် – ဦးဇင်ထာဆင်
၂။ ဆမားဒူဝါဆင်ဝါးနောင် – မရမ်ဘောက်လာ
၃။ သူတို့တိုက်ခဲ့ရသောစစ်နှင့် သူတို့ရှာနေသောငြိမ်းချမ်းရေး – သန်းဝင်းလှိုင်
သန်းဝင်းလှိုင် ရေးသားပြုစုတဲ့ စာမျက်နှာ၃၈၀ The Wars We Fought & The Peace We Look For စာအုပ် အရင်တုန်းက ဝယ်မရလို့ . . ဒီနေ့မှ စာပေနန်းတော်မှာတွေ့တော့ ၄၅၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ စာရေးသူ သန်းဝင်းလှိုင် ကချင်ပြည်နယ်ကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက် ဒုက္ခသည်စခန်းများ၊ ကချင်၊ မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်၊ အရပ်သားခေါင်းဆောင်များနဲ့ တွေ့ဆုံ ပြုစုခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကေအိုင်အေ ကချင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ ၁၉၅၉ ကတည်းက အမျိုးသားရေးနဲ့ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တော်လှန်ပြီး၊ ယခုအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အင်အယ်ဒီ + တပ်မတော် စစ်တပ် ၂ခုပေါင်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများအထိ အသေးစိတ် မှတ်တမ်းများ၊ ကြေငြာချက်များကို ဖေါ်ပြရေးသားထားပါတယ်။
စစ်အစိုးရဖက်သား ကချင်စိတ်ပေမဲ့ တိုက်ခိုက်ကြွမ်းကျင်သူတွေ ဗိုလ်မှုးချုပ်အယ်ကွန်ဖန် လိုလူမျိုးများ ရှိသလို ကချင်အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်နဲ့ တော်ကြီးမျက်မဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်အောင် လို ပညာတတ်ဘွဲ့ရ ကချင်မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများက အဆတစ်ရာမက ပိုလို့တောင် ရှိနေပါတယ်။ ဆေးတက္ကသိုလ်(မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်) ပြီးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း အင်လန်းအောင် MBBS, ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်း ဦးပီတာ (BE Civil), ဦးနော်လွန့်(BE Civil, ကွယ်လွန်)၊ ဦးနော်ရစ် (BSc ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) .. တို့ဟာ ကျနော်သိတဲ့ လူနည်းစု ပညာတတ် မျိုးချစ် KIA စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပညာတတ် KIA စစ်ဗိုလ်သစ်များစွာလည်း ခေတ်နဲ့အညီ ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။
ဘုရားသခင် ကချင်လူမျိုးများ၊ ကချင်ပြညနယ်ကို ငြိမ်းချမ်းပါစေ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ငှက်ပျောခင်း ဖရဲခင်းကိစ္စက ဝမ်းနည်းစရာပဲ။ (ကချင်ပြည်နယ်မှ ကချင်လုပ်သားများ) – Kyi Soe / Ko Sunny
Kyi Soe ပြောတဲ့ ငှက်ပျောခင်း ဖရဲခင်းကိစ္စက ဝမ်းနည်းစရာပဲ။ ကျော်အလည်ရောက်ဖူးတဲ့ အဖိုးအဖွားရဲ့ဇာတိမြေ ယူနန်ပြည်နယ် ထိန်ချုံးမြို့နယ်က ဟော်ရွှင်ရှန်းရွာဆို နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ပြီး ရွှံ့အုတ်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ် မီးတောင်ကျောက်မည်းမည်းနဲ့ခင်းထားတဲ့လမ်း ရှေးကမိန်းမတွေအဝတ်လျော်ဆင်းတဲ့ ဇရပ်နဲ့ချောင်းတွေ ယနေ့ထိ မူလအနေအထားအတိုင်း ကောင်းမွန်စွာထိမ်းသိမ်းထားတယ်။ အစိုးရက ဟော်ရွှင်ရှန်းရွာကို သမိုင်းဝင်ရွာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး တိုးရစ်တွေအလည်အပတ်များတဲ့ (ပြည်တွင်းတရုတ်တွေအသိများ)နေရာလည်းဖြစ်လာတယ်။ နောက်ပြီး အဲ့ဒီရွာထဲက အိမ်အရောင်းအဝယ်လုပ်ရင် ဒီရွာမှာနေထိုင်ဖူးတဲ့လူတွေကပဲ ရောင်းဝယ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ် ပြင်ပကလူတွေ တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရောင်းလို့ဝယ်လို့ (လုံးဝ) မရဘူး။ ဥပမာ အဖိုးအဖွားတို့ဆိုရင် ဟော်ရွှင်ရှန်းရွာမှာ နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့သူတွေ သူတို့ကရတယ်။ ရွာမှာ ရွာခံလူတွေရဲ့နာမည်စာရင်း မျိုးဆက် ၄, ၅ ခုအထိ အတိအကျမှတ်တမ်းရှိတယ်။
By Ko Sunny
လွယ်ဂျယ်မှာ တရုပ်နယ်စပ် မြေပြန့်ကြီး အရင်ကစပါးစိုက်တယ်. .အခု တရုပ်က ငွေရင်းပေးပြီး မြန်မာကချင်တွေက ကြံစိုက်တယ်။ သကြားစက်တွေက တရုပ်ပြည်ဖက် နတည်ထားတယ်။
နောက်တခုက မြေအောက်က ယူရေနီယံလို အဖိုးတန် သတ္တုတွေကို စက်တွင်းတူး အက်စစ်ထည့် အရည်ဖျော်ပြီး ပေပါကြီးတွေနဲ့စုတ်ထုတ် ယူသွားကြတယ်။ တရုပ်ပြည်မှာ သန့်စင်စက်ရုံတွေ ထားတယ်။
အလုပ်သမားတွေက မြန်မာပြည်သားတွေ။ . .
Kyi Soe added5new photos.Follow
ကိုယ်က မတတ်တော့ သူများက လုပ်တယ်။ ကိုယ်က ငတ်တော့ ကျွန်ဖြစ်တယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ တရုတ်တွေ လာလုပ်နေတဲ့ ငှက်ပျောခင်းပါ။ ဗမာတွေ မြေသိမ်း စစ်တပ်နဲ့ ခရိုနီတွေ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်တတ်ပါပြီလား။ အိမ်နောက်ဖေး ဈေးဆိုင်တည် စားလို့ရတာ အကုန်စိုက် ဆိုတာလောက်နဲ့ သွားနေဦးမှာလား။ နိုင်ငံဟာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အမှန်တကယ် လုပ်ရမှာ။ အခုသူများ မယားငယ်ပေး ကြေးလောက်နဲ့ လာခိုးလုပ်နေတာတောင် ဒေသခံတွေကို အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးတယ်။ လမ်းဖောက်ပေးတယ်။
Gidon တောင်ဘက်ခြမ်း မြန်မာစစ်တပ်သိမ်းပိုက် ၂၀၁၆ဒီဇင်ဘာ
16 Dec., 2:30 am., Gidon တောင်ဘက်ခြမ်း
မနက် ၂နာရီကျော်မှာ ရန်သူလက်နက်ကြီးတွေစတင်ပစ်တော့ ခါတိုင်းလိုပဲလို့တွေးရင်းမှေးနေသေးတယ်။ မနက် ၄နာရီလောက်ရောက်တော့ လိုင်ဇာဘက်က ဆင်းရူးတောင်ဘက်အပါအဝင် ကျနော်တို့KIAရဲ့စခန်းအများအပြားကို လက်နက်ကြီးပစ်ခံရတာ သိလိုက်တယ်။ ဒီနေ့ ထိုးစစ်အကြီးအကျယ်ရှိမယ်ဆိုတာ သေချာသလောက်ရှိနေပြီ။ Gidonတောင်ဘက်ခြမ်းကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ ကျနော်တို့ ၃ဝ ယောက်စလုံး အသင့်ပြင်ထားလိုက်တယ်။
ရိက္ခာခြောက်တွေကို ဝါးမြိုရင်ဒီနေ့တက်လာမယ့်ရန်သူကို မျော်နေရုံသာ.. တိုက်လေယဉ်တက်လာပြီဆိုပြီး စက်ဝင်လာတော့ ကိုယ့်နေရာက ကောင်းကင်ကိုကြည့်နေစဉ်ပဲ တိုက်လေယဉ်နှစ်စီး ဗုံးလာကျဲတယ်။ ပေါင် ၅၀၀ ဗုံးပါတယ်ထင်တယ် ပေါက်ကွဲတာအရင်ထက်ကျယ်တယ်။ လက်နက်ကြီးပစ်တာလည်းမရပ်ဘူး။ တိုက်လေယဉ်ပြန်အလှည့် နောက်နှစ်စီးဆက်တိုက်လာပစ်တယ်။
လက်နက်ကြီးရပ်သွားတာ ၅မိနစ်မကြာဘူး Gidon အရှေ့ဘက်ခြမ်းက သေနတ်သံတွေစတင်ကြားရပါပြီ။
ရန်သူခြေလျင်တပ်တွေ ထူးထူးခြားခြား မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်လာတာပါ။ ရန်သူက ကျနော်တို့ Gidonတောင်ဘက်ခြမ်းကို ရောက်လာတော့မှာမို့လို့ ကျည်ကတ်တွေကို အသင့်တန်းစီထားလိုက်တယ်။
Gidon အရှေ့ဘက်ခြမ်းက ရန်သူတွေကိုထိန်းထားနိုင်တုန်း အခြေအနေတော့ သိပ်မကောင်းတော့ဘူး။ ဒီအချိန်အထိ ကျနော်တို့ Gidon တောင်ဘက်ခြမ်း သေနတ်မဖောက်ရသေးဘူး။ ၁၂၀ မမ တွေ ပစ်လွန်းလို့ ဂျမ်းဖြစ်ချင်နေပြီလို့ ပြောသံကြားရတယ်။ စက်ဝင်လာတယ် ရန်သူ ၁၀၀၀ ကျော်Gidonအရှေ့ဘက်ခြမ်းကို ကွင်းပြီး တောင်ဘက်ကိုရောက်လာပြီတဲ့။ ပြောနေရုံရှိသေးတယ် ရန်သူတက်လာပါပြီ။
တောင်ဘက်ကရောက်လာတဲ့ရန်သူတွေကို ပစ်ခတ်နေရချိန်ပါ။ သူတို့ဘာတွေစားထားလဲ မသိဘူး အရက်သောက်ထားရင်တော့ မူးနေမှာ။
အခုတော့ ကျည်ထိတယ် ပြန်ထလာတယ်။ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေလိုဘဲ။ သွေးလည်းသိပ်မထွက်သလိုပဲ။ ကျနော်တို့ကြားနေရတဲ့ ရေခဲသားထိုးပေးတယ် ဆိုတဲ့သတင်း သေချာပါပြီ။ တော်တော်နဲ့မသေဘူး။ လူတိုင်းသေရမှာကိုကြောက်ပေမယ့် သူတို့ကသေရမှာ မကြောက်သလိုပဲ။ ကျနော်တို့ဆီသေနတ်နဲ့လည်း ပြန်မပစ်သလောက်ပဲ။ တစ်ယောက်နှစ်ယောက်သာ ပြန်ပစ်တယ်။ ကျနော်အယောက်ဘယ်နှစ်ဆယ်ကို ပစ်လဲလိုက်တယ်မသိတော့ဘူး မမှတ်မိတော့သလောက်ကို များပါတယ်။
ကျနော်တို့တောင်ဘက်ခြမ်းမှာ ပစ်နေတာ တစ်နာရီကျော်ကြာသွားပြီ။ ကျနော့ကတုတ်ကျင်းရှေ့ ကိုက် ၁၀၀ အတွင်းမှာ ရန်သူတွေလည်း ပုံနေပြီ။ ကိုယ့်လူကိုယ်လူစစ်ကြည့်တယ် တစ်ယောက်မှမလျော့သေးဘူး။ အလောင်းတွေပေါ်နင်းပြီးတက်လာတဲ့ရန်သူ့ဘက်က ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေ နည်းနည်းစိတ်လာတယ်။ ကျနော် ကျည်တစ်ကတ်ပြီးတစ်ကတ်လဲတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း အော်ရင်း ပစ်ရင်း ပစ်ရင်း ပစ်ရင်း မျက်ရည်တွေ အလိုလိုကျလာပါတော့တယ်။
မျက်ရည်ကျရင်း ပစ်ရင်း အော်ရင်း ကျနော့ရဲဘော်တွေကိုကြည့်လိုက်တယ်သူတို့တွေလည်း မျက်ရည်ကျနေတာပဲ ကျနော်ရင်ထဲ ပိုဆို့သွားတယ်
လူတွေအများကြီးကိုပစ်သတ်နေရချိန် ခများလည်းမျက်ရည်ကျလာလိမ့်မယ် ဆိုတာကျနော်ပြောရဲတယ်။
ပထမတော့ ငါဟာလူတွေအများကြီးကို ပစ်သတ်နေရပါလားလို့တွေးရင်း အလိုလိုမျက်ရည်ထွက်လာတာပါ။ နောက်ကိုယ့်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုကြည့်ရင်း သူတို့ပါ ပစ်ရင်းမျက်ရည်ထွက်နေတာမြင်တော့ “ငါတို့ Gidon ကနေ ဆုတ်ခွါပေးရတော့မှာပါလား” လို့တွေးလိုက်မိလို့ မျက်ရည်တွေပိုထွက်လာတာပါ။
အခြေနေအရပ်ရပ်ကို အစီရင်ခံပြီးနောက် 4:00 pm မှာ စစ်ဆင်ရေးကွတ်ကဲမှုရုံးက ဆုတ်ခွါမိန့်ပေးတယ်။
ကျနော်တို့ Gidon ကို နှမျောတတစွာနဲ့ပဲ ရန်သူတွေဝိုင်းထားတဲ့ ကြားကဖောက်ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ဖောက်ထွက်လာစဉ် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကျနော်တို့နောက်ထပ်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။
လေယဉ်ဗုံးကျဲစဉ် ကျဆုံးသွားတဲ့ မျိုးချစ်စစ်သည်၇ယောက်ထဲက စစ်သည်နှစ်ဦးရဲ့အလောင်း မြေတွေပိနေခဲ့ပြီမို့ ထားခဲ့လိုက်ရတယ်။ အရင်က ကျဆုံးသွားတဲ့ မျိုးချစ်စစ်သည်ခြောက်ယောက်နဲ့ ခုသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ သူတို့ချစ်တဲ့ Gidon မှာနေကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ သူတို့ရဲ့ဝိဉာဉ် ကတော့ မြတ်ဘုရားရဲ့ရင်ခွင်ဆီခိုနားနေလောက်ပြီလို့ ဖြေသိမ့်ရင်း ကျနော့ခြေလှမ်းတွေကို မိခင် 252 တပ်ရင်းဆီရွေ့လျားလိုက်ပါတော့တယ်။
Jan Khone (တဆင့်ပြန်လည်ဝေမျှသည်)
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အမြန်စတင်ရန် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ သဘောထားထုတ်ပြန်